Masar: Dhimashada Dibadbaxayaasha oo Korortay
Saraakiisha caafimaadka ee dalka Masar ayaa sheegey in dad tiradooda kor u dhaafeyso boqol lagu diley magaalada Qaahira goob ay banaanbaxyo ka dhigayeen taageerayaasha madaxweynaha talada laga tuurey Mohamed Morsi.
Sida ay ku waramayaan dhakhaatiirta dadkaasi waxaa toogtey ciidamada dowladda, waxaana tirada dhaawaca ay ku sheegeen inay kun qof ka badan tahay. Hase yeeshee saraakiisha dowladda KMG ee Masar waxay sheegayaan in 30 qof oo keliya ay ku dhinteen rabshadaha dhacay.
Dilka iyo dhaawacyadan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada ay ka dalbadeen shacabka inay dhigaan banaanbaxyo ciidamada awood loogu siinayo inay kula dagaalamaan waxa ay ugu yeereen kooxo argagixso ah oo khatar ku ah amniga qaranka.
Ururka Ikhwaanul Muslimiin, ayaa sheegey in hadalka ciidamada uu ahaa hanjabaad lagu beegsanayo taageerayaasha ururkooda oo doonaya in dib Mursi xukunka loogu soo celiyo.
Wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni ayaa Caasho Cuud oo Washington jooga uga waramay wararkii ugu danbeeyey qalalaasaha Masar,
Dhageyso Wareysiga Saxnuuni